Musharraxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo weeraray Somalida | Berberanews.com
Home WARARKA Musharraxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo weeraray Somalida
Musharraxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo weeraray Somalida
Minnesota-(Berberanews)-Musharraxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa isu soo bax uu ku qabtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ay ku badan yihin waxa uu taageerayaashiisa u sheegay in gobolkooda qaxootiga soo degay ee Soomaalida ah ay gaystaan dhibaatooyin xagjirnimo wata.
Wuxuu tusaale u soo qaatay ninkii tooreyda ku weeraray dad wax ka iibsanayay suuq wayn oo laga tukaamaysto.
Ninkaasi ayaa tooriyeeyay ugu yaraan sagaal ruux kahor inta aan la tooganin.
Trump ayaa sheegay in dadka Minnesota ay dhibatao ka soo gaartay martigelinta qaxootiga Soomaalida.
“Minnesota waxaad ku aragteen dhibaatooyinka ay keeneen qaxootiga siiba qaxootiga halkaan ku badan ee Soomaalida. Idinkoonan war u heyn ayay yimideen gobolkiina iyagoo waliba qaarkood ku biiraya kooxda IS. Waxayna xagjirnimada ku faafinaya dalkeena iyo dunida oo dhan”, ayuu yiri Trump oo taageerayaashiisa kula hadlaaya gobolka Minnesota.
Wuxuu ku jiraa lugutiisii ugu dambeysay ee ololaha ka hor doorashada Talaadada, wuxuuna sheegay in haddii la doorto uu hubin doono in dadka deegaanada qaxootiga martigeliyo uu latashi la yeesho hor inta aysan qaxootiga qaabilin.
Donald Trump horay ayuu ugu eedeeyay Soomaalidu inay ku biiraan Daacish waxuuna sheegay inay tahay in isbadal lagu sameeyo waaxda socdaalka ee dalka Maraykanka.
Donald Trump waxuu si weyn u cambaareeyey siyaasada Barack Obama iyo xisbiga Dimuqraadiga.Waxuu dhaleeceeyey dadka soo galootiga ah ee Maraykanka taga.
Donald Trump ayaa mar kale sheegay in doorashada madaxtinimada Mareykanka loogu xaglinayo Hillary Clinton.
Hadalka Trump ayaa ku soo beegmaya kaddib markii waaxda dambi barista ee FBI-da ay sheeghtay in aysan hayn wax caddeyn ah oo muujinaya in Hillary ay gaysatay dambi marka la eego farriimo Email oo ay ka dirtay cinwaankeeda khaaska ah.
Previous articleCabsida laga qabo Weerar Nugliyeer ah oo Kuuriyada Waqooyi Qaadi Karto Xogta Dahsoon
Next articleJamaal Cali Xuseen oo ku dhawaaqay in garabkiisu qabanayaan shirweynihii aan caadiga ahayn ee maxkamadu go,aamisay